Oromiyaan waraana cimaa qaama tokkoon hogganamu qabaachuu baannaan haalli Somaaliyaa fi Ruwaandaa mudachaa ture Oromiyaa mudachuuf kan jiraatu tahuun wal-nama hin gaafachiisu. | Kichuu
Posted on January 17, 2019 by kichuu_admin
[Hegeree 24 News Amajjii 17/2019] Dhimma WBO irratti ODP fi ABOn walii galtee Isaanii hujitti hiikuu dhabuu kanaan walitti bu’iinsi waraanaa kan yeroo ammaa lixa Oromiyaa fi Gujitti WBO fi waraana Fedraalaa Motummaa Itoopiyaa ODPn hogganamu jiddutti deemaa jiru kuni hawaasa Oromoo jiddutti tokkummaa Sabaa kana balleeysuufii hijaa umuu malee bu’aa tokkollee buusuuf hin jiraatu.
1.Wal-waraansa ABO fi ODP jiddutti gaggeeyfamaa jiru kanaan
ABOn motummaa irraa bu’aa siyaasaa buufachuu dandeenyaan
qaamoonni Siyaasaa Oromoo birootiis waraana dhunfaa isaanii ijaarratanii motummaa irraa bu’aa siyaasaa akka ABOn motummaa irraa buufatee buufachuu qabna jechuun isaanii hin olamu.
2.Waraanni ODPn hogganamaa jiru kuni Oromiyaa keeysatti WBO injifate jennaan maqaa WBO nyaanyisaa ykn kunuunsa turtan ja’uun hawaasa nageyaa hidhuu , reebuu , doorsisuu fi biyyaa baasuun cimee itti fufuuf jiraata.
Haalli Kun tahee jennaan motummaa fi hawaasa Oromoo jiddutti wal-shakkii fi wal-jibbaa guddaa kan umuuf jiraatu tahuu caalaa Oromiyaan haala Somaaliyaa fi Ruwaandaa keeysatti deemaa turee fi deemaa jirutti tarkaanfachuun isii halkaniimiti guyyaa adiidha.
Ummanni Oromoo meeshaa lolaa kan diina isaa ittiin injifatu “Nukleera” if harkaa qaba.
Meeshaan saniis tokkummaa isaati.
Gaa kana waan taheef haaloonni armaan olitti ibsinee kuni ni taha taanaan tokkummaan Ummata Oromoo akka dhadhaa ibidda bu’eetti bayxi waan taheef Abboottiin Gadaa fi Abboottiin Amantaa Akkasuma Haadhooleen siiqqee Oromoo daddaffiin waraana ODP fi ABO jiddutti deemaa jiru kana dhaabanii WBOn mooraa leenjiitti seenee akkuma waliif galtee ABO fi ODP sanitti Kora bittinneeysaa fi Polisii Oromiyaatti makamee nageyaa Oromiyaa tiysuu keeysatti shoora gama isaa akka bahuuf haala mijjeeysuutu isin irraa eggamaa jira.
Haala filmaata biyyooleeysaa kan 2020tti guutuu biyyatti keeysatti
gaggeeyfamuuf jiraatu laalchisee Paartileen Siyaasaa Oromoo hunduu ODP waliin tahuudhaan ODP deeggaruu baannaan qaamoonni G7 waliin maqaa tokkummaa Itoopiyaatiin Oromiyaa keeysatti if ijaaraa Jiran kunneen Paartilee Siyaasaa Oromoo 14n kana laafatti mohachuu dandeyuutu dhufuuf jiraata.
Kun tahee jennaan waggaa 500 kan biraa Ummata Oromoo gabrummaa haareyaaf saaxiluuf jiraanna waan taheef Oromiyaa fi Ummata Oromoof jannee waliif irra kutuu , Gadaa walii waliif kabajuu fi waliif hogganamuu baruudhaan dhaloota dhufaa jiru waan gaarii haa dhaalchifnuu.!
Ammallee akka Oromiyaatti waraana cimaa qaama tokko jalatti hogganamuudhaan guutuu daangaa Oromiyaa jihaa hundaan tiiysuu dandeyu daddaffiin ummachuu qabna jechuuniin barreeyfama kiyya gabaabaa kana xumura.
(Abdusalam Suutee )
ONN LIVE : Simannaa Jila ABO Godina Baalee magaalaa Gindhiiritti Gaggeeffame.
1 thought on “Oromiyaan waraana cimaa qaama tokkoon hogganamu qabaachuu baannaan haalli Somaaliyaa fi Ruwaandaa mudachaa ture Oromiyaa mudachuuf kan jiraatu tahuun wal-nama hin gaafachiisu.”
Lammii on January 17, 2019 at 9:47 am said:
Waan dhimma waranaa atti jteef deegarsaan yadakeef qaba. Garuu, “… qaamoonni G7 waliin maqaa tokkummaa Itoopiyaatiin Oromiyaa keeysatti if ijaaraa Jiran kunneen Paartilee Siyaasaa Oromoo 14n kana laafatti mohachuu dandeyuutu dhufuuf jiraata.” ka jete sirri natti hinfakaatu. Innumayyu, PDO (OPDOn) gaafa kana goote, harka tokko illee Oromoota irraa hin argatu. Oromoon gowwaa mitti kan diina (G7/Amara) of iratti filu. Kan afaanii fi dangaa Oromiyaa ballesuuf deema jiru (G7 ykn Amara) ofi iratti fila taannaan qabsoon QBO fi Uumatta Oromoon bilisummaaf du’aa jiru kami ree?
ODPn carraa Oromoota irraa kan argachuu dandeesu, yoou ilmaan habashoota of keessaa calaltee bastee oromoota qofaan oli hamma gaditti ooganamtee fi akka ilmaan Oromoo qofaattti filannoof dorgomte duwwdha kan filanoo hinjifachuuf carraa argatu.